Uyiqinisekisa njani indawo yakho ukuba yaBhaliswa ku-imeyile | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 19, 2008 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 12, 2014 Douglas Karr
Siphinde sajonga enye yeendawo zabaxumi bethu namhlanje. Baza kuhamba kuhlanganiso lwethu lwe-imeyile kungekudala-into elungileyo leyo. Ndicinga ukuba iiwebhusayithi zabo ngokuqinisekileyo sele zifakwe kuluhlu ... nasi isizathu…
Banefom yoqhakamshelwano kwiwebhusayithi yabo. Kuhle ngokwaneleyo, iqela lamasimi ukuthumela lonke ulwazi lwakho lomntu kubo ukuba babhalisele inyathelo labo le-imeyile. Ukujongwa ngokusondeleyo, nangona kunjalo, kwaye sisixhobo abasibeke ngaphandle kogaxekile ukuze basebenzise ithuba.
<INPUT type=hidden value="nabani na@someone.com"igama =" sendto "/>
Qaphela iindawo ezifihliweyo apho ungafaka khona idilesi ye-imeyile! Njengovavanyo, ndatsala le fomu, ndabeka idilesi ye-imeyile kuyo, ndaza ndabeka ikhonkco kwenye indawo efihliweyo. Ndicofe ukungenisa kunye nomzuzu kamva, bendine-imeyile ye-SPAM kwibhokisi yam engenayo!
Nantsi indlela abagaxekile abangaqhubeka nokuthumela i-imeyile ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuvalwa. Konke ekufuneka bekwenzile kukufumana ifom efana nale lakho kwiwebhusayithi kwaye bangabhala inkqubo etyhala izigidi ze-imeyile ngobusuku bonke. Ngubani ovaliweyo? Ayinguwe spammer… inkampani iyenza!
Le fomu ikwiwebhusayithi zigidi Ishishini ledola, hayi ishishini elincinci. Kwaye kukho amawaka ezi ntlobo zeefom zokungazithembi kuyo yonke indawo kumnatha. Isimanga apha kukuba bayenzile kwiphepha le-ASP-iphepha elinokuthi ngokulula lenze ukukhangela iidilesi ze-imeyile kwiseva kwaye bazongeze.
Kwimeko apho uyazibuza, ngokuqinisekileyo sibaxelele!
tags: uluhlu lwabamnyama lwe-imeyileIfom ye-imeyileifom ye-imeyile yokuba sesichengeniifomu yogaxekile
Ngokomntu, ndiyathandabuza nabani na ongenayo idilesi ye-imeyile edweliswe kwiblogi yabo kunye nefom yoqhagamshelwano kuphela, kodwa kubonakala ngathi kuphela kwe-100% indlela yokwenza oko. Ndikwathanda iidilesi ze-imeyile ezinemifanekiso ezinokubonwa ngabantu kodwa kufuneka bazibhale. Mhlawumbi iFlash elungisiweyo izakuba yenye indlela. Ngaba ungumfana wefomu yoqhagamshelwano kuphela?
Sukuthandabuza – sizama ukuzikhusela kuphela. Injongo yoqhagamshelwano lwe-IS ukuze abantu bakwazi ukunxibelelana nathi ngaphandle kokusishiya sivulekele i-spambots.
@Stephen Unyanisile ukuba uninzi lwabadwelisi benkqubo ababhala i-spam bots bayonqena. Ndiyathetha, ungavele ucazulule iziphumo ze http://tinyurl.com/yuje9z kwaye ufumane amakhulu amawaka eedilesi kwi-spam.
Olona khuseleko lungcono lusekuyeka ukupapasha iidilesi ze-imeyile, kwaye usebenzise i ifom yewebhu endaweni yoko.
Ndiyayiqonda into eniyithethayo nobabini. Kum, ifom yoqhagamshelwano ivakalelwa njengenombolo ye-1-800 endaweni yenombolo yeselula kwikhadi leshishini. Ivakala kakhulu itikiti leshishini / lenkxaso.
Ndiyakholelwa ukuba iiPDFs zisicatshulwa esicacileyo (ubuncinci uGoogle unokuzifaka ngesigcawu) kwaye i-imeyile yakho ikwi-resume yakho, Doug.
Epreli 12, 2008 ngo-3: 29 AM
Ndifumene iposti yakho yebhlog inomdla kakhulu, kodwa andiyiqondi kakuhle ukuba le nto isebenza njani.
Ukuba ugcwalisa le fomu, i-spam bots iyifumana njani idilesi ye-imeyile yakho?
Ukuba isayithi ineendawo ezifihliweyo kunye nedilesi yakho ye-imeyile ngamaxesha onke, ngoko kuyacaca ukuba i-spam bots izifumana njani.
Kodwa xa uyigcwalisa, musa ukubetha nje ukuthumela, kwaye ke amasimi afihliweyo ahambe, akunjalo? Ngaba i-spam bot ineprogram emiselweyo kwelo phepha elithatha oko uchwetheza kuyo okanye into ebekwe yisayithi kwiindawo ezifihliweyo ngelixa uyisebenzisa?
Andiqondi. Unganceda ucacise ngakumbi oku?
Yaye yintoni enokwenziwa? Uyiphumeza njani ifom yokuba i-spam bots ayinakuyenza nayo le nto? Ngaba ngumbandela nje wokungasebenzisi imihlaba efihlakeleyo yeedilesi ze-imeyile okanye ngaba ingaphezulu koko?
Epreli 12, 2008 ngo-10: 49 AM
Njengondwendwe, akukho ngozi. Umba ngowabantu abafake le fomu. A Spammer uyakwazi 'highjack' ifomu kwaye uthumele spam ngaphandle usebenzisa yona. Sisenzo esibi esisetyenziswe yinkampani kwiwebhusayithi yabo.
Epreli 12, 2008 ngo-3: 32 AM
Omnye umbuzo….ukuba ngokuqinisekileyo kufuneka ndibeke idilesi yam ye-imeyile kwiphepha, ngoko yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokuyenza? Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa iikhowudi zoonobumba be-hexidecimal?
Epreli 12, 2008 ngo-10: 50 AM
I-spammers zineendlela eziyinkimbinkimbi kakhulu zokukhasa ezikwazi ukuvuna iidilesi ze-imeyile ngeendlela ezininzi. Ndingadinwa ngokunyanisekileyo ukubeka idilesi yam ye-imeyile kwiphepha lewebhu kwaye, endaweni yoko, ndingathumela ifom yoqhagamshelwano.